စက်ရုပ် ဘ၀ က အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ပါစေ
၀ဲ... ဆိုတာ... မြန်မာ အသုံး မဟုတ်ဘူးနော်..
ကိုဆောင်းယွန်းက တိုင်းရင်းသား လား.
ကျွန်မကတော့ ဝဲတယ်ဆ်ိုတာ ဗန်းစကားအနေနဲ့ သုံးတယ်ထင်မိပါတယ်။
ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာထက် ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေး ကြိုက်မိပါတယ်။ကျွန်မကတော ဖြစ်နေတာ...
လက်ရှိကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဘ၀ကို အတိကျဆုံး ပုံဖော်ပြသထားတဲ့ ကဗျာလေး။ ဘ၀ကို ရုန်းကန်လှုပ်ရှားရင်း ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်သွားတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ နောက်ကြောင်းလှည့်ပြန်ဖို့ရာလည်း မစွမ်းသာတော့ ရှေ့ဆက်လျှောက်နေရတဲ့ အဖြစ်အပျက်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်ကြည့်တဲ့ အခါမှာတော့...
ဓမဒိဌကျကျ ဖော်ကြူးသီဖွဲ့ထားတဲ့ ကဗျာလှလှလေးပါ။အားပါးတရ ခံစားသွားပါတယ်အကို။
အကိုရေ ထိမိလိုက်တာ ကဗျာလေးက၊ ရင်ထဲက ခံစားပီး ဖတ်သွားတယ်ရှင်
ကဗျာလေးတွေ ဖတ်လိုက်ရတိုင်း ခံစားမှု့တမျိုးရရှိခဲ့ပါတယ်..။ ဘ၀အကြောင်းကို မာန်ပါပါ ရေးထားတဲ့ စာသားတွေဟာ တော်တော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်..အကို။ ကိုယ့်အိမ်မှာ အေးချမ်းသာယာမှု့မရှိသေးသမျှတော့ ကျွန်တော်တို့ ဟာ စက်ရုပ်ဖြစ်နေရအုံးပါအကို။ ပျော်ရွှင်ပါစေ..အားပေးခင်မင်လျှက်...
ဟုတ်တယ် ဒီခေတ်မှာ လူးသားတွေက စက်ရုပ်တစ်ရုပ်လိုပဲ . . . . လုပ်နေရတာတွေက ဇယ်ဆက်နေသလိုပဲ . . . . ကောင်းလိုက်တဲ့ ကဗျာလေး အကိုရေ ကြိုက်မိတယ် ကဗျာလေးကို . .